doctor humour – Healthy Life Journal
All posts tagged "doctor humour"
အေးပါသမီးရယ် . . .
ကောင်မလေးတစ်ယောက် ခေါင်းမူးနေသဖြင့် ဆေးခန်းလာပြလေသည်။ ဆရာဝန်က စစ်ဆေးပြီးနောက်- “ ခေါင်းဒီလောက်မူးနေတာကို တစ်ယောက်တည်းလာရသလား . . . နောက်ဆို အမျိုးသားကို ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ခဲ့နော်” “ သမီးက အပျိုပဲရှိသေးတယ်ရှင့် . . . စကားကို ဆင်ခြင်ပြောပေးပါ...
လက်ခမဟုတ်ဘူးနော် ပညာကြေး . . .
” ဆရာ.. သွားတစ်ချောင်းနုတ်တာ ဘယ်လောက် ကြာမှာလဲဟင်” ” ဦးလေးသာ ငြိမ်ငြိမ်နေမယ်ဆို တစ်မိနစ် အတွင်းမှာ အနာသက်သက်သာသာနဲ့ပြီးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ” ” သွားနုတ်ခကရော ဘယ်လောက်လဲ ဆရာ” “ တစ်သိန်းပါ” “ တစ်မိနစ်လောက်လေးပဲ ကြာတာကို တစ်သိန်းတောင်...
ဆေးဆိုင်ကို လူတစ်ယောက်လာပြီး ဆေးဝယ်ပါတယ်။ “ ထိရောက်တဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးပေးပါဗျာ” “ ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး၊ ကိုက်ခဲနေတာက ကလေးလား၊ လူကြီးလား၊ ဘယ်အရွယ်လဲ” “ ကလေးလည်း မဟုတ်ဘူး၊ လူကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ခွေးပါ” “ ရှင်...
“မင်း တလောက ခဏခဏသတိမေ့တတ်နေတာ.. အခုတော်တော်ပြန်အဆင်ပြေနေပါလားကွ” “အေး ဟုတ်တယ် . . . ငါသွားပြနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးက မှတ်ဥာဏ်လျော့နည်းတဲ့သူတွေကို ကုထုံးအသစ် နဲ့ကုပေးနေတာ တော်တော်ထိရောက်တယ်” “တယ်ဟုတ်ပါလားဟ . . . ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ကုပေးတာလဲ ပြောပြပါဦး” “တစ်ခါသွားပြတာနဲ့...
ငြိမ်ငြိမ်နေ . . .
အရိုးဆရာဝန်ထံသို့ လူနာအဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ “ကျွန်မလက်ကို အကွေးအဆန့်လုပ်တိုင်း အဆစ်တွေထဲကနာတယ် ဆရာ” “ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်ဗျ ” “ အဲ့ဒါတွေလုပ်နေရင် အချိန်ကြာမှာပေါ့ . . မနာအောင်လုပ်နိုင်မယ့် အမြန်ဆုံးနည်းမရှိဘူးလား ဆရာရယ်” “ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ ....
ငါတော်ငါတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘ၀င်မြင့်နေတဲ့ ဒေါက်တာတစ်ယောက်ထံသို့ ရွာတစ်ရွာမှ လူနာတစ်ယောက်ရောက်လာလေသည်။ “အနာက ပိုးဝင်ပြီး တော်တော်ဆိုးနေတာပဲ. . ငါ့ဆီမလာခင် ဘယ်သူနဲ့ပြထားသေး လဲ” “ကျွန်တော်တို့ရွာက ဆေးဆရာလေးနဲ့ပြပြီး အကြံဥာဏ်တွေယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ” “တော်တော်ညံ့တဲ့သူပဲ… ဒီလိုညံ့တဲ့သူပြောတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကလည်း ဘယ်လိုလုပ်အသုံးဝင်မှာလဲ… မင်းကို သူက ဘာတွေပြောလိုက်သေးလဲ”...